Manana mikraoskaopy miafina ve ny iPad Pro? Toa izany tokoa | Vaovao IPhone
Androany izahay mitondra anao ny iray amin'ireo vaovao izay tsy mitsahatra ny manaitra ahy eo am-panoratako azy. Fantatsika tsara fa matetika i Apple dia manafina toetra mampiavaka ny fitaovany, na satria tsy mbola navitrika izy ireo na noho izy ireo tsy nahavita ny fenitry ny kalitaon'ny orinasa Cupertino ary efa kilemaina.
Toa ny iPad Pro dia misy endrika makia makro, zavatra iray izay tsy nolazaina tamintsika ary tsy eo amin'ny iPhone Pro koa. Andeha hojerentsika ity zava-baovao mahaliana ity izay hita vao tsy ela akory ary andao haminavina ny fiantraikan'izany amin'ny hoavin'ny iPad.
Ity fampiasa ity dia tsikaritr'ireo mpamorona ny Halide, fampiharana fakantsary malaza iOS izay mahafinaritra ny mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao. Ao amin'ny bilaogin'izy ireo no nahitan'izy ireo fa ny fakantsary iPad Pro dia afaka mifantoka amin'ny halavirana na dia kely noho ny telo santimetatra aza. Raha manana ny iPhone akaiky anao ianao, dia mora ny manamarika fa rehefa manakaiky loatra ilay zavatra tianao halaina sary ianao, dia tsy misy hita. Izany dia satria ny solomaso iPhone ary hatreto dia tsy manana fahaizana maka sary amin'ny endrika "Macro" ny iPhone.
Raha ny fahitana azy, ary na eo aza ny filazan'ny orinasa Cupertino tsy misy na inona na inona momba azy, ny fakantsary iPad 2021 miaraka amin'ny processeur M1 an'i Apple dia afaka maka sary endrika makro, noho izany, amin'ny halavirana lavitra kokoa noho ny an'ny iPad iPad 2020 aza. mahay mandray, tao amin'ny bilaogin'i Halide dia nampitahain'izy ireo ny iPads ary tsy mampino ny valiny. Midika izany fa ny fahatongavan'ny sensor makro amin'ny ho avy iPhone 13 izay ho tonga amin'ny faran'ny taona.
Sary manarona ny bilaogin'i Halide.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Manana mikraoskaopy miafina ve ny iPad Pro? Toa izany
Samsung dia efa manamboatra ny efijery OLED 120 Hz an'ny iPhone 13
Izahay dia nisedra tranga sy kojakoja manintona XVIDA ho an'ny iPhone